Sat, Jul 21, 2018 | 22:40:22 NST
मनिषा कोइरालाको शल्यक्रिया सफल
मंसिर २६ – अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको अमेरिकामा पाठेघरको शल्यक्रिया गरिएको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित म्यानहटनमा रहेको स्लोन केटरिङ क्यान्सर सेन्टरमा नेपाली समय अनुसार मंगलबार बिहान नौ बजेतिर शल्यक्रिया गरिएको हो ।
आज किम्फको अन्तिम दिन
काठमाडौं, मंसिर २६ – काठमाडौंमा चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सव (किम्फ) आज सकिँदैछ । डकुमेन्ट्री हनी हन्टर्स र ओस्कार अर्वाडमा मनोनित फिल्म क्याराभानबाट ख्याति कमाएका फ्रान्सेली फिल्मकर्मी एरिक भ्यालीको नयाँ डकुमेन्ट्री हिमालयन गोल्ड रसको प्रर्दशनपछि महोत्सव समापन हुने आयोजक हिमाल एसोसियसनले जनाएको छ ।
दुबईमा पहिलो नेपाली बक्स फिल्म अवार्ड
मंसिर २५ - बक्स फिल्म अवार्ड २०६९ दुबर्इमा सम्पन्न भएको छ । अन्तरास्ट्रिय बजारमा पहिलो पटक नेपाली बक्स फिल्म अवार्डलाई सम्युक्त अरब एमिरेट्स युएईको दुबइमा एक कार्यक्रमका बिच बिभिन्न बिधामा प्रदान गरिएको छ ।
मनिषाको स्वास्थ्य लाभको कामना
काठमाडौं, मंसिर २५ - भारतीय सिने उद्योगकी नेपाली नायिका मनिषा कोइरालाको अमेरिकामा सोमवार शल्यक्रिया गरिँदै छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको मेमोराईज स्यालोन क्याटरिन क्यान्सर अस्पतालमा नेपाली समय अनुसार सोमवार बेलुकी अप्रेसन गर्न लागिएको हो । नेपालमै रहँदा पेट दुख्ने समस्या देखा परेपछि उनले नर्भिक अस्पतालमा स्वास्थ्य परिक्षण गरेकी थिईन् ।
श्रमिक कन्सर्टमा झुमे मजदुर
सुमन पुरी/उज्यालो रात दिन जोखिम उठाइ गाडी कुदाँउछौ, बुझ्नेले त भन्छन् तिमीलाई अचानक पर्‍यो नबुझ्नेले भन्छन् गाडी व्याक सारेर मार्‍यो ए डाइभर दाई, ए डाइभर दाई कसले माया गर्छ तिमीलाई ?
किम्फमा आज १५ डकुमेन्ट्री
काठमाडौं, मंसिर २३ – अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सवमा आज १५ वटा डकुमेन्ट्री प्रदर्शन हुँदैछन् । तीमध्ये ५ वटा नेपाली डकुमेन्ट्री प्रदर्शन हुने आयोजक हिमाल एशोसियसनले जनाएको छ ।
काठमाडौमा आजदेखि अन्तराष्ट्रिय फिल्म महोत्सव
काठमाडौ, मंसिर २२ – काठमाडौमा शुक्रबारदेखि अन्तराष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सव किम्फ सुरु हुदैछ । राष्ट्रिय सभा गृह र नेपाल पर्यटन बोर्डमा महोत्सव देखाइने छ । २६ गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा २८ देशमा ६२ वटा छोटा फिल्म, डकुमेन्ट्री, फिक्सन, एनिमेसन प्रस्तुत गरिनेछ ।
किम्फमा २८ देशका ६२ फिल्म
काठमाडौं, मंसिर २० – १० औं काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सव किम्फ शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएको छ । मंसिर २६ गतेसम्म राष्ट्रिय सभागृह र नेपाल पर्यटन बोर्डमा हुने महोत्सवमा २८ देशका ६२ फिल्म, डकुमेन्ट्री, फिक्सन, छोटा फिल्म, एनिमेसन समावेश हुने आयोजकले जनाएको छ ।
आज स्वरसम्राट नारायणगोपालको स्मृति दिवश
काठमाडौ, मंसिर १९ – आज स्वरसम्राट नारायणगोपालको २२ औं स्मृति दिवस, संगितकर्मीहरुले बिभिन्न कार्यक्रम गरेर उहाँलाई सभ्झिदैछन् । स्वरसम्राटको सम्झनामा मंगलबार महाराजगञ्जमा बनाइएको उहाँको शालिक छेउमा कार्यक्रम हुदैछ ।
घाँटू, कृष्ण चरित्र र सेर्का गायनका गुरु रहेनन्
आश गुरुङ/उज्यालो । लमजुङ, मंसिर १७ - लमजुङको पर्यटकीय भुजुङ गाउँका घाँटू, कृष्ण चरित्र साथै सेर्का गायनका गुरु ७७ बर्षिय चम्सार्की गुरुङको निधन भएको छ ।
कसले पाउला विन्ध्यबासिनी म्युजिक अवार्ड?
काठमाडौं, मंसिर १७ – विन्ध्यबासिनी म्युजिक अवार्ड २०६९ आज वितरण हुँदैछ । २८ विधामा वितरण हुने अवार्डका लागि हरेक विधामा पाँचपाँच वटा गीतसंगीत तथा श्रष्टा मनोनयनमा छन् ।
मनिषा कोइरालालाई क्यान्सर
काठमाडौं, मंसिर १४ - भारतीय सिने उद्योगकी चर्चित नेपाली नायिका मनिषा कोइरालालाई क्यान्सर भएको छ । उनले मुम्बईको जसलोक अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराईरहेको समाचार भारतीय पत्रिका टाईम्स अफ इण्डियाको अनलाईन संस्करणमा प्रकाशित भएको छ ।
‘सेतो धरती’ बिक्रीमा प्रतिबन्ध !
पोखरा, मंसिर १४ – २०६८ सालको मदन पुरस्कार विजेता कृति ‘सेतो धरती’ पोखरामा चलिरहेको पुस्तक प्रदर्शनीमा बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पुस्तकमा आफू्नो जातिलाई हेपेको भन्दै बिरोध जनाएको भूजेल समाज सेवा समितिले आयोजकलाई चिठ्ठी पठाएर नै बिक्री नगर्न उर्दी जारी गरेको हो ।
‘गंगनम स्टाइल’ ले बनायो युट्यूबमा नयाँ रेकर्ड (भिडियो सहित)
मंसिर १० – विश्वव्यापी रुपमा ध्यान खिच्दै इन्टरनेटमा भाइरल फैलिएको दक्षिण कोरियाली गीत गंगनम स्टाइलले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । यसअघि सबैभन्दा बढी हेरिएको रेकर्ड कायम गरेको जस्टिन बिबरको ‘बेबी’ लाई उछिन्दै ‘गंगनम स्टाइल’ ले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो ।
अन्तराष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा आज भारतीय प्रस्तुती
काठमाडौ, मंसिर ९ – काठमाडौमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा शनिबार भारतका कलाकारहरुले आफ्नो प्रस्तुति देखाउने छन् । अनामनगरको मण्डला थिएटरमा भारतीय कलाकारले ‘जीवित या मृत’ नाटक मञ्चन गर्नेछन् ।
काठमाडौमा आजदेखि लोकसंगीत फिल्म महोत्सव
काठमाडौ, मंसिर ८ – नेपाल लोकबाजा संग्रहालयको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लोकसंगित फिल्म महोत्सव शुरु भएको छ । काठमाडौको कालिकास्थानमा शुरु भएको महोत्सव आइतबारसम्म चल्नेछ । ‘जीवनका लागि संगीत, बाँच्नका लागि संगीत’ भन्ने नाराका साथ शुरु भएको महोत्सवमा २५ डकुमेन्ट्री देखाइनेछ ।
पटिहानी : चितवनको आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्य
मोहन बस्याल/उज्यालो चितवन, मंसिर ५ –चितवन नेपालको तेश्रो ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य हो । चितवन भन्ने बित्तिकै धेरैले सौराहालाई सम्झिन्छन् । तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसरा नजिकैको पटिहानीमा पनि पर्यटकीय आकर्षण कम छैन । ठूला होटलहरु थपिएका छन् तर पर्यटकको संख्या भने धेरै बढ्न सकेको छैन । नारायणगढबाट १४ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने पटिहानी गाविसको घटगाई क्षेत्र सूर्यास्त हेर्ने राम्रो ठाउँ हो । राप्ती नदीसंगै जोडिएको रमणीय गाउँ पटिहानीमा पुग्नेले आदिवासी थारु संस्कृतिसँगै राप्ती नदीमा डुं...
नातिकाजी सङ्गीत पुरस्कार–२०६९ को घोषणा
काठमाडौँ, मंसिर ४ - नातिकाजी स्मृति समाजले नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउनेहरुलाई हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘नातिकाजी सङ्गीत पुरस्कार–२०६९’ घोषणा गरेको ।
भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनमाथि शिव सेनाको आक्रमण
कात्तिक ३० - शिव सेनाका कार्यकर्ताले भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनमाथि आक्रमण गरेका छन् । शिवसेनाका अध्यक्ष बाल ठाकरेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गएका बेला अमिताभ र छोरा अभिषेकलाइ शिवसेनाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका हुन् ।
‘यो मन किन चञ्चल हुन्छ’ सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं – परम्परागत नेपाली संगीतसँग पप संगीतलाई फ्युजन गरेर तयार पारिएको गीत ‘यो मन किन चञ्चल हुन्छ’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अजय एसजेबी राणाको निर्देशनमा तयार भएको म्युजिक भिडियोमा गायक सुभाष प्रधानले स्वर दिएका छन् ।
लक्ष्मी पूजा र दीपावली पनि आजै
काठमाडौं, कात्तिक २८ - तिहारको तेश्रो दिन मंगलवार बेलुकी घरघरमा लक्ष्मीपूजा र दीपावली गरिँदैछ । दिनभर व्रत बसी बेलुकी दीपावलीका साथ धनधान्यकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मीको पूजा गर्ने चलन छ । यो दिन घरका झ्यालढोकाका साथै गाग्री र कलशमा फूलका माला लगाई आँगन, पिंढी, दलान, कोठाचोटा र छिंडी गाईको गोबरले लिपेर सफा र चिल्लो पारिन्छ । चामलको पीठोबाट लक्ष्मीको पाईलाको प्रतीक चिन्ह बनाई आँगनदेखि भण्डार वा ढुकुटीसम्म पुर्याउने गरिन्छ । बेलुका यिनै पाईलामा टेक्दै लक्ष्मी घरभित्र प्रवेश गरेर विराजमान हुन्छ...
जनगायक जीवन शर्माको देउसी (भिडियो)
सिमली छायाँमा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो असी झ्न ठूलो दुःखले घेरेको जनगायक भनेर चिनिने जीवन शर्माले गायको यो गित नसुन्ने र यसलाई न गुनगुनाउने त सायदै कोही होलान् । उहाँलाई दुःखी नेपाली गायक भनेर पछि चिनिन्छ ।
गजल एल्बम प्रजुशा बजारमा
काठमाडौं, कात्तिक १९ - सञ्चारकर्मी तथा गीतकार पुरुषोत्तम बस्नेतको पहिलो एकल गजल एल्बम प्रजुशा बजारमा आएको छ । एक कार्यक्रमकाबीच वरिष्ठ गीतकार डा. कृष्णहरि बराल र क्लासिक एफएमकी अध्यक्ष मञ्जु कार्की लामिछानेले एल्बमको बिमोचन गरे ।
बन्ने होइन त मिस एयर होस्टेज ?
काठमाडौं, कात्तिक १६ - मिस एयर होस्टेज २०१२ को आवेदन खुलेको छ । नेपाल भरका युवतीहरुलाई मध्य नजर राखी व्यक्तित्व विकासको साथै एयर होस्टेज वन्ने इच्छा भएका र रोजगारीको अवसरको खोजीमा रहेकाहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मिस एयर होस्टेज आयोजना गर्न लागेको आयोजक सिजन मिडियाले जनाएको छ ।
पोखरेली साहित्यकार केसी सम्मानित
पोखरा, कात्तिक १६ – पोखराका साहित्यकार कुलबहादुर केसी सम्मानित हुनुभएको छ । पोखराको साहित्यिक विकासमा गरेको योगदानको कदर गर्दै पोखराका छुट्टाछुट्टै तीन साहित्यिक संस्थाले केसीलाई सम्मान गरेका हुन् ।
ओछ्यानबाटै एल्बम लोकार्पण
नेपालगञ्ज, कात्तिक १४ – बरिष्ठ गायक तथा साहित्यकार प्रेमप्रकाश मल्लले बर्दियाका गायक विपी वाग्लेको नयाँ एल्बम मधुर झंकारको लोकार्पण मंगलबार आफ्नो ओच्छ्यानबाटै गर्नुभयो । लामो समयदेखि शारीरिक रुपमा अस्वस्थ मल्लले नेपालगञ्जको धम्बोजीमा आफु सुतेको ओच्छ्यानबाटै एल्बम लोकार्पण गर्नुभएको हो ।
घाँटू र कृष्ण चरित्र गायनका गुरु विरामी
आश गुरुङ/उज्यालो । लमजुङ, कात्तिक १२ - लमजुङको पर्यटकीय भुजुङ गाउँका घाँटू, कृष्ण चरित्र तथा सोरठी गायनका गुरु ७७ बर्षिय चम्सार्की गुरुङ गम्भीर विरामी परेका छन् । भुजुङ - ३ घर भएका गुरुङ झण्डै २ महिनादेखि विरामीले ओछ्यानमा थला परेका हुन् ।
हास्य कलाकार जसपाल भट्टीको निधन
कात्तिक ९ – भारतीय चर्चित हास्य कलाकार जसपाल भट्टीको बुधबार राती निधन भएको छ । पन्जाबमा भएको गाडी दुर्घटनामा परेर भट्टीको निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
दशैंमा कलाकार – को कहाँ ब्यस्त ?
सूर्यकुमार क्षेत्री/उज्यालो काठमाडौ, कात्तिक ५ – मालश्री धुनसँगै नेपालीको एउटा ठूलो चाड दशैं घर घरमा भित्रिसकेको छ । कामका लागि घर भन्दा टाढा रहेकामध्ये कति घर पुगिसके, कति जाने तरखरमा छन् । काठमाडौमा बस्ने धेरैजसो कलाकार अहिले जिल्ला जिल्लामा हुने सांगितिक कार्यक्रममा गीत गाउन र अभिनय गर्न पुगिसकेका छन् ।
सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ र हरिदेवी कोइराला सम्मानित
पोखरा, कात्तिक ३ – पोखराका तीनजना अग्रज श्रष्टालाई सम्मान गरिएको छ । साहित्यकार सरुभक्त, कवि तीर्थ श्रेष्ठ र लोकगायिका हरिदेवी कोइराला शुक्रबार सम्मानित भएका हुन् ।
विमलको “फस्ट मुभ” बजारमा
काठमाडौं, असोज ३० – दशैं तिहारको अवसरमा गायक विमल गौतमले पप तथा आधुनिक गीति एल्बम “फस्ट मूभ” सार्वजनिक गरेका छन् । केही कलेक्सन एल्वममा स्वर दिएका विमलको यो पहिलो एकल एल्बम हो ।
नेपाली कलाकार बेल्जियममा ब्यस्त
सन्तोष न्यौपाने/उज्यालो | बेल्जियम, असोज ३० – दशै नजिकिएसंगै नेपाली कलाकारहरु बेल्जियमको बिभिन्न सांगितिक कार्यक्रमहरुमा ब्यस्त हुन थालेका छन् ।
र्‍याम्पमा तेश्रोलिंगी सुन्दरीहरु (भिडियो)
काठमाडौं, असोज २९ – तेश्रोलिंगी, समलिंगीले कस्तो जीवनसाथीको कल्पना गर्लान् ? आइतबार काठमाडौंमा भएको तेश्रोलिंगी सौन्दर्य प्रतियोगिताका एक सहभागीलाई प्रश्न गरियो, ‘तपाई कस्तो जीवन साथीको परिकल्पना गर्नु हुन्छ ?’
तेश्रो लिङ्गी सुन्दरी पूर्णिमा श्रेष्ठ (फेसन शो र साँस्कृतिक कार्यक्रमको फोटो फिचर)
काठमाडौं - तेश्रोलिङ्गी सौन्दर्य प्रतियोगिताको यसबर्षको ताज पूर्णिमा श्रेष्ठले पहिरिएकी छिन् । पहिलो दक्षिण एसियाली यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक खेलकूद महोत्सव अन्तर्गत आईतवार भएको तेश्रोलिङ्गी सौन्दर्य प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धी अन्य १४ जनालाई पछि पार्दै पूर्णिमाले ताज पहिरिएकी हुन् ।
‘पिया के गाँव’ विमोचित
काठमाडौं, असोज २६ - गायिका बन्दना मैनालीको भोजपुरी गिती एल्बम ‘पिया के गाँव’ विमोचन गरिएको छ । मधेश मिडिया हाउसमा शुक्रबार एल्बमको विमोचन गरिएको हो ।
हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शन फुकुवा
सूर्यकुमार क्षेत्री/उज्यालो काठमाडौ, असोज २५ – नेकपा माओवादीले हिन्दी चलचित्र चल्न नदिने आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । बैद्यपक्ष माओवादीले चलचित्रका सरोकारवालासंग छलफल गरी हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन फुक्का गरेको हो ।
लक्ष्मीको ‘न्यायको लडाइँ’
रविराज बराल/ उज्यालो । काठमाडौं – आफ्ना पतिको हत्यापछि आफुले पाएको दुःख समेटेर बनेको डकुमेन्ट्री ‘न्यायको लडाइँ’ हेर्दाहर्दै स्वर्गीय पत्रकार डकेन्द्रराज थापाकी पत्नी लक्ष्मीले आशु थाम्न सकिनन् ।
भैरव अर्यालको स्मृतिमा २ श्रष्टा सम्मानित
काठमाडौं, असोज २१ - प्रख्यात हास्य व्यंग्यकार स्वर्गिय भैरव अर्यालको स्मृति दिवसका अवसरमा दुई जना स्रष्टालाई सम्मान गरिएको छ । आइतवार अर्यालको ७३ औ जन्मजयन्ती तथा ३६ औ स्मृति दिवस अवसरमा स्रष्टाहरुलाई सम्मान गरिएको हो ।
मिस इकलेज (फोटो फिचर)
काठमाडौं, असोज २० - काठमाडौं बाफलको ज्ञान कुञ्ज कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत अठार वर्षिया गृष्मा बस्नतेले मिस इकलेज २०१२ को ताज जितेकी छिन् । शुक्रवार राती काठमाडौंमा भएको फाइनल चरणमा उनले मिस इकलेजको ताजका साथै वेष्ट हेयर र वेष्ट स्माइल टाइटल पनि हात पारिन् । मिस इकलेजको विजेताहरुका केही तस्विर सहितको फोटो फिचर | तस्विर सौजन्य : सिजन मिडिया
मिस इकलेजको ताजा गृष्मा वस्नेतलाई
काठमाडौं, असोज २० - अठार वर्षिया गृष्मा बस्नतेले मिस इकलेज २०१२ को ताज जितेकी छिन् । शुक्रवार राती काठमाडौंमा भएको फाइनल चरणमा उनले ताजा जितेकी हुन् । ज्ञानकुन्ज कलेज वाफलमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत १८ वर्षिया वस्नेतले मिस इकलेजको ताजका साथै वेष्ट हेयर र वेष्ट स्माइल टाइटल पनि हात पारिन् । फस्ट रनरअप साउथ वइस्टन स्टेट कलेजमा १२ मा अध्ययनरत दिव्या भण्डारीले मिस फोटोजेनिक फेसकुक लाइक अवार्डका साथमा फष्ट रनरअपको ताज जितिन् भने नासा कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत प्रकृति श्रेष्ठले मिस डिसिप्लेन अवार्ड सह...